Blog Reader: [ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်]2New Entries: ဤသို့ခရီးထွက်ခဲ့ရာဝယ်... (ဒုတိယပိုင်း)
[ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ်]2New Entries: ဤသို့ခရီးထွက်ခဲ့ရာဝယ်... (ဒုတိယပိုင်း)
"ဘယ်သွား မလဲ ဆရာ"
"ဗျာ..!! ဟား ဆရာ ကျနော့်ကား အဲ့လောက် အဝေးကြီးမလိုက်ဘူး.."
"အော်ဟော.. ဆောရီး.. နေပြည်တော်သွားမယ့် ကားဂိတ်ကို ပြောတာဗျ.. အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးကားကွင်း.. ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ.."
"ဟုတ်ကဲ့ ၅၀၀၀ ပဲပေးပါ.."
"ဗျာ.. များတာပေါ့ဗျ.. စီးနေကျဗျ.. နေ့တိုင်းသွားနေကျ ၃၀၀၀ ထား"
"၄၅၀၀ တော့ ရမယ်ဗျာ.. အဝေးကြီးဗျ ဒီအချိန် ကားကျပ်တယ်.."
"ကယ် ၄၀၀၀ တော့ ထားဗျာ နော်.." တောင်းပန်သလိုလို.. မရရင် မစီးတော့ မလိုလို လုပ်လိုက်တော့မှ..
"တက်.. တက်.." တဲ့...
ကားပေါ်လည်း ရောက်ရော.. မြားနဲ့ပစ်လိုက်သလို "ဝူးးးး.." ကနဲ.. မောင်းထွက်သွားလိုက်တာ.. မင်္ဂလာဈေးနားကနေ.. ပုဇွန်တောင်ကုန်းကျော်တံတား.. ပြီးတော့ စက်စမ်း.. ကြက်ဘဲဈေး... အိုးဟိုးဟိုး.. တွေ့သမျှကား အကုန်ကျော်.. အတင်းကျော်.. မောင်းချက်ကတော့ Transporter ဇတ်ကားထဲကလိုလို.. Tokyo Drift ထဲကလိုလို.. အဲ့လို.. အဲ့လို.. ရက်စက်တယ် မောင်းချက်.. ကြမ်းချက်.. မိုက်ချက်က ဟောလိဝုဒ်ကမင်းသားတွေ ငိုသွားလောက်တယ်..။
ကားကလည်း တော်တော် ကောင်းတယ်.. "ဂလုံး ဂလုံး ဂလွမ်းဂလွမ်း ဒုန်းဒုန်း" နဲ့ အသံကို စုံလို့.. လူလည်း ကားထဲမှာ လူးလှိမ့်ခုန်ပေါက်နေတာပဲ.. ကားတံခါး ပွင့်ထွက်သွားမှာစိုးလို့ လက်တစ်ဖက်က ဆွဲထားရသေးတယ်... ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့ လမ်းတွေကလည်း တော်တော်ကောင်းတယ်လေ သိတဲ့အတိုင်း ချိုင့်တွေ ခွက်တွေနဲ့.. ကားတွေကလည်း များမှများ.. ဘယ်က ဘယ်က ကားတွေမှန်းမသိဘူး.. တစ်စီးနဲ့ တစ်စီး ဦးစားမပေး.. သူဦးသူ.. ကိုယ်ဦးကိုယ်.. ကျနော် စီးသွားမိတဲ့ကားက CNG သုံး Van ကား ဆိုတော့ နောက်ခန်းမှာ တင်ထားတဲ့ Gas အိုးကြီးကိုမြင်နေရတယ်.. ကျောနားမှာ ကပ်ထားတာ အသည်းယားစရာဗျာ.. မတော်တဆ ပေါက်များကွဲရင် မတွေးရဲဘူး.. ကြောက်လည်းကြောက်.. လန့်လည်းလန့် ခြေဖျား လက်ဖျားတွေတောင် အေးစက်စက်.. ကားရပ်ခိုင်းပြီး ဆင်းတောင်ပြေးချင်မိတယ်..။
ဝေဇယန္တာလမ်းပေါ် ရောက်တော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ လမ်းကဖြောင့်တာကိုး.. မောင်းတာများ "ရွှီးးး.." ကနဲ.. လမ်းက ဖြောင့်သာ ဖြောင့်တာ ကျဉ်းတယ်လေ.. အန္တရာယ်များတာပေါ့... မီးပွိုင့်တွေဖြတ်တော့လည်း အတင်းဗျာ "တဝှီးဝှီး.." နဲ့ တကယ်တကယ်.. တကယ့် အက်ရှင်ဇတ်ကားထဲ ကိုယ်တိုင် ရောက်နေသလိုပါပဲ.. ဘုရားတနေရတယ်.. ယာဉ်စည်းကမ်း.. လမ်းစည်းကမ်း.. အသက်အန္တရာယ် ဘာမှကို ဂရုမစိုက်ပါလားနော်.. ပါရမီလမ်းဆုံ နားလည်းရောက်ရော.. ဒီအတိုင်းဆို မဖြစ်ဘူး.. မဖြစ်ဘူး.. စကားလေးဘာလေးပြောပြီး အာရုံပြောင်းအောင်လုပ်မှဆိုပြီး စကားမရှိစကားရှာရတော့တယ်.. တော်ကြာ နေပြည်တော်မရောက်ပဲ သေပြည်တော် ရောက်နေမှဖြင့်.. ဟုတ်ပေ့ဖြစ်နေမယ်..။
"ခင်ဗျား ကားက တော်တော် ဆွဲတာပဲဗျနော်.."
"ဟုတ်တယ် အစ်ကို CNG လေ အဆွဲကတော့ ကောင်းသလားမမေးနဲ့ ဒါတောင် အကုန်မနင်းသေးဘူး"
" ဟုတ်လား ဓါတ်ဆီထက် ပိုကောင်းမှာပေါ့နော့်"
"ဟုတ်တယ် ဓါတ်ဆီကားထက် ဒီကောင်က အထမြန်တယ်လေ.. နင်းလိုက်တာနဲ့ တန်းပြေးတာပဲ.. ဆီစားလည်း သက်သာတယ်လေ.. ဓါတ်ဆီကား မလိုက်နိုင်တဲ့ဈေးဆို ကျနော်တို့က လိုက်နိုင်တာပေါ့.. တစ်အိုးဖြည့်ထားရင် မောင်းရောပဲ.. ကိုယ့်အတွက် ပိုကျန်တာပေါ့.. အုံနာခ ပေးပြီးရင် တစ်ပုလင်းခွဲလောက်တော့ ကျန်တယ်.. ဆီထုတ်ရတာပဲ စိတ်ညစ်တာ.. မောင်းရတာတော့ကိုက်တယ်.. ဆီဈေးလည်း သိတ်မကြီးဘူးလေ.. ဓါတ်ဆီနဲ့ဆို အစ်ကိုပေးတဲ့ဈေးနဲ့ ဘယ်လိုက်နိုင်မလဲ.."
"အောဟော.. ဒီလိုလား.. ဆီထုတ်ရတာက ဘာလို့ စိတ်ညစ်တာတုန်းဗျ.. မလွယ်ဘူးလား.."
"စိတ်ညစ်ဆို တန်းစီရတာလေဗျာ.. တစ်ခါတစ်ခါ ဆီထုတ်ဖို့အရေး တန်းစီရတာ တစ်နေကုန်ရော.. ကားတန်းကြီးကလည်း ရှည်မှရှည်.. ကိုယ်အလှည့်ရောက်မှ မီးပြတ်သွားတာက ရှိသေး.. အဲ့ဒါဆို သေရော.. မီးလာတဲ့ဆိုင် ပြန်သွားတန်းစီရပြန်ရော.. သိတဲ့အတိုင်း ရန်ကုန်က မီးက မှန်တာမှ မဟုတ်တာ.."
"ဟုတ်တာပေါ့.. အင်း.. "
"ဒီလိုပါပဲ အစ်ကိုရာ ခေတ်ကြီးက မကောင်းတော့ ဒီလိုပဲ လုပ်စားရမှာပေါ့.."
"အင်း.. ဒါနဲ့.. ရတယ်နော် ကားဆရာ.. အေးဆေး.. ကျနော် အချိန်ရတယ် နေပြည်တော်ကားက (၇း၃၀) မှ ထွက်မှာ.."
"ခင်ဗျားက အေးဆေးတာ ကျနော်က (၆း၃၀) ကားပြန်အပ်ရမှာဗျ.. မအေးဆေးဘူး အခုတောင် ခွဲဖို့ ၅ မိနစ်ပဲလိုတော့တာ.. ဒီနေ့တော့ ကားအပ်ဖို့ တော်တော်တောင်နောက်ကျနေပြီ.. မဖြစ်ဖူး သွက်သွက်နင်းမှ.."
"ရော့.. ကားဆရာ ဒီမှာ ၄၀၀၀ ကျေးဇူးပါပဲနော်.."
(၇) နာရီလည်း ခွဲခါနီးရော.. ကားပေါ် ခရီးသည်တွေ တက်ကြတယ်.. ခရီးသည် အများစုက ကြည့်ရတာ စနေ၊ တနင်္ဂနွေ ရုံးပိတ်ရက် ရန်ကုန်ပြန်လာတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ.. နေ့ချင်းပြန် အလုပ်ကိစ္စသွားမယ့် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ များမယ်ထင်တယ်.. ကျနော့်လို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စနဲ့သွားတဲ့သူလည်း ရှိမှာပေါ့လေ.. ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်တော့ ကျနော့်ခုံဘေးမှာ ခပ်ဝဝ အန်ကယ်ကြီးတစ်ယောက်.. စကြားရတာကတော့ ကားအင်ဂျင်သံ "ဘရောဘရော.." နဲ့ Air Con: တွေဘာတွေ မဖွင့်သေးလို့.. တံခါးတွေဘာတွေ မပိတ်သေးလို့ ဆူညံနေတာ နေမှာပါလေလို့..။
ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ... ကားက ဒီတိုင်းကြီးဗျ.. ထွက်သာထွက်လာတာ ဘာ Air Con: မှ မဖွင့်ဘူး.. အင်ဂျင်သံကလည်း "ဘရော ဘရော" နဲ့.. တံခါးမှန်တွေကလည်း စက်သေနတ်ပစ်သလို "ဒက်ဒက် ဒက်ဒက်" နဲ့.. ဘာမှမကြားရတဲ့ မြန်မာဇတ်လမ်းကလည်း ဖွင့်ထားသေးတယ်.. သွားပြီ.. ငါတော့ မှားပြီ.. လက်မှတ်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျိန်ဆဲနေမိတယ်.. မရောက်ဖူးလို့.. ရောက်ဖူးချင်လို့ သွားမလို့ပါဆို နားနားနေနေ သက်တောင့် သက်သာ သွားချင်တာပေါ့နော်.. ကားကြီးက မသက်သာလိုက်တာ.. အိပ်မရပြုမရနဲ့.. စိတ်ညစ်ပါတယ်ဗျာ..။
"အားလုံးအောက်ဆင်းကြပါ.. မပုတင်လေးတွေ ယူပြီးအောက်ဆင်းကြပါ" ဆိုတဲ့ အော်သံကြားတော့ လန့်နိုးသွားရော.. ဘာပါလိမ့် မပုတင်ဆိုတာ..! အော်ဟော.... မှတ်ပုံတင် စစ်တာကိုး.. ကားပေါ်တက်စစ်လိုက် ပြီးရော.. အောက်ဆင်းခိုင်းနေသေးတယ်.. အိပ်ချင်မူးတူး အောက်ဆင်း မှတ်ပုံတင်ပြ ပြီးတော့ ပြန်တက်.. မပုတင်ကိုလည်း သေချာကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့များ.. စစ်နေသေးတယ်.. အိပ်ချင်စိတ်က မပြေသေးတော့ မျက်လုံးလေးပြန်မှိတ်ပြီး ပြန်မှိန်းနေတာပေါ့..။
ခဏလေးလည်း မောင်းပြီးရော.. ရုတ်တရက် စူးစူးရှရှ အလင်းရောင်တွေကြောင့် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့... အလိုလေ.. တောကြီးထဲမှာ လင်းထိန်နေပါ့လား.. ဘုရားဘုရား..!! ဘယ်များရောက်နေတာပါလိမ့်..!! မီးတိုင်ကြီးတွေကလည်း အများကြီးပါလား... လမ်းကြီးကလည်း နှစ်လမ်းမောင်း.. အကျယ်ကြီး.. ဖြူးနေတာပဲ.. မှန်တံခါးရဲ့ "တဒက်ဒက်.." စက်သေနတ်ပစ်သံတောင် မကြားရတော့ပါလား.. တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့.. ကျုပ်တို့ ရန်ကုန်မြို့ကြီးသာ ဒီလိုလင်းထိန်နေရင်.. လမ်းတွေသာ ဒီလိုကောင်းနေရင်... ။